Maamulka Barcelona Oo Aamusnidii Ka Baxay Xilli Uu Madaxweyne Ku Xigeenka Barca Ee Jordi Cardoner Ka Hadlay Haddii Ay Neymar Dib Ugala Soo Saxeexan Doonaan PSG. – GOOL24.NET
October 19, 2018 Apdihakem Omer Adem
Madaxweyne ku xigeenka kooxda Barcelona ee Jordi Cardoner ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaqiiqada wararka sheegaya in kooxdoodu ay dib ula soo saxeexan doonto xiddigeedi hore ee Neymar JR oo haatan ka qayb ah safka Paris Saint-Germain.
Neymar ayaa afar sano oo midho fiican dhalay lasoo qaatay kooxda ree Catalonia isaga oo kula soo guulaystay laba jeer oo tartanka horyaalka La Liga ah iyo hal Champions League sidoo kalena bah-wadaag weerar oo laga cabsado la samaystay Luis Suarez iyo Lionel Messi.
Jordi Cardoner ayaa biyo qabaw ku shubay wararka 26 jirkan dib ula xidhiidhinaya kooxdii uu qaabka xun kaga baxay xagaagii 2017 isaga oo sheegay in boodhka kooxdu aysan kawada hadal suurogalnimada Camp Nou loogu soo celinayo.
Madaxweyne ku xigeenka Barca oo arrimahaas ka hadlaya ayaa yidhi “Hal qof oo kamid ah boodhka Barca kama hadal suurogalnimada Neymar dib loogu soo celinayo, Haatan wax jawaab ah kama bixin karno sababtoo ah xataa hal qof ma xusin”
Dhinaca kale Cardoner waxa uu si dadban u duray Neymar isaga oo sheegay in haddii uu aaminaad la’aan dhinacooga ah kooxda kaga tagay isla markaana ay haatan doonayan inay dib usoo ceshadaan xaaladu sidan ka duwanaan lahayd.
“Isagu waa midkii baxay, Sidan way ka duwanaan lahayd haddii aanaan aaminsanan lahayn oo aan imika doonayno inaan dib usoo celino, Laakiin taasi maaha xaalada”